iOS 11.3 inozobvumidza iwe kusimbisa Kutenga kweMhuri kuburikidza neFace ID | IPhone nhau
iOS 11.3 inozobvumidza yekusimbisa kutenga kweMhuri kuburikidza neFace ID
Vashandisi veIfree X vane account yemhuri varatidzira kusagadzikana kwavo kana zvasvika pakuita zvekutenga zvekutenga nemhuri iyi, kubvira nhasi, Apple haibvumidze kushandiswa kweFace ID kupa mvumo yekutenga.
Vashandisi veTouch ID vagara vaine mukana wekubvumidza zvese zvinotengwa nemhuri kuburikidza nekusimbisa biometric, ficha isingawanikwe kuburikidza neFace ID, zvirinani kusvikira inotevera iOS yekuvandudza.
Kwechingori pasi pevhiki, Apple yakatanga, zvese kune vanogadzira uye vashandisi veveruzhinji beta, yekutanga beta yeIOS 11.3, beta iyo inotiunzira huwandu hwenhau yatakakuzivisa kare mune zvimwe zvinyorwa.
Chimwe chitsva, izvo zvisina kutsanangurwa mumanotsi eiyi beta yekutanga, sezvo yanga isiri iyo yega isingaratidze nhau dzese, tinoiwana iri mukana wekugona kupa mvumo, pakupedzisira, kutenga kwakaitwa neMhuri kuburikidza neFace ID.
Kekutanga nguva yatinogashira chiziviso chinotikoka kuti tibvumidze kutenga kwemhuri, isu tichafanirwa kuisa kodhi yekuchengetedza ye iPhone yedu chete kekutanga. Gare gare, zvinotibvunza isu kana tichida kugonesa kutenga kweMhuri kuburikidza neFace ID Zvekutenga mune ramangwana. Kana tangomisa iyo ID yeFace, pese patinogamuchira chiziviso chekubvumidza kutenga kweMhuri tinofanirwa kubaya bhatani reKutenga, panguva iyo iyo ID ID inozoitwa kuti isimbise kutenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.3 inozobvumidza yekusimbisa kutenga kweMhuri kuburikidza neFace ID
mophie Charge Force Powerstation, bhatiri rekunze rine waya isina waya